China PVC Vinyl အပြင်ဘက်ပလပ်စတစ်ကုန်းပတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | လွမ်
တစ်လျှောက်လုံး 1. 100% ဗီနိုင်း
4. ASTM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် & နှစ်ပေါင်း 30 အာမခံ
အဆင့်မြင့် PVC ဆယ်လူလာနည်းပညာ၊
သဘာဝ "သစ်သား - စပါး" အသွင်အပြင်;
အစွန်းအထင်းများ၊ ခြစ်ရာများ၊ မှိုများ၊ အစိုဓာတ်များ၊ မီးများ၊
လက်သည်းများသို့မဟုတ် screw နှစ်ခုအတွက်ကြိုတင်တူးဖော်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။
Fastener & groove system သည်တပ်ဆင်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်။
၄၀-၅၀% သည်အခြားနည်းလမ်းများထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသော်လည်းပိုမိုအားကောင်း။ တာရှည်ခံသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ပါ။
ရှေ့သို့ သံမဏိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအလင်း (၂- ထုပ်)
နောက်တစ်ခု: အကွံမြားအကွောငျးမြားစှာ Post ကို Cap